Ungachinja sei Wallpaper yeiyo iPad | IPhone nhau
Ungachinja sei iyo iPad Wallpaper
Imwe neimwe vhezheni yeIOS 8 inowanzo kutisvitsa mifananidzo mitsva uye inonakidza iyo yatinogona kushandisa kugadzirisa mudziyo wedu zvinoenderana nezvatinoda. Tinogona kusarudza mifananidzo yechisikwa kana zvinhu, mifananidzo ine mavara akasiyana uye maumbirwo ejometri uye zvakare ane simba mifananidzo. Iyi mifananidzo ine simba ichawedzera kufamba kune iyo Wallpaper yeiyo iPad yedu ichienderera, izvo zvinoreva kuti kuwedzera kwekushandisa bhatiri. Tinogona zvakare kushandisa chero chifananidzo chatakachengeta pane yedu iPad (roll, chero dambarefu, mifananidzo mukutenderera), iyo inotibvumidza kushandisa pikicha kana chifananidzo icho chatinonyanya kufarira kugara tichiona pane yedu yekukiya skrini kana mune kumashure kweiyo springboard.
Chinja iPad Wallpaper
Chekutanga pane zvese tinokwira kumusoro Zvirongwa > Wallpaper
Mifananidzo miviri icharatidzirwa pazasi inoenderana neyekumashure mufananidzo iyo yatakaisa pane yekukiya skrini uye chifananidzo chatakaisa pane yekumba skrini / bhodhi.
Kuti uchinje mufananidzo unoratidzwa, tinya pa Sarudza imwe homwe.
Pachiratidziro chinotevera isu tinofanirwa kusarudza mhando yemufananidzo iyo yatinoda kumisikidza sepamberi: yakamisikidzwa mufananidzo, ine simba (pamwe nekufamba) kana mufananidzo kubva patiri reel.
Kana tangosarudza mhando yemufananidzo iyo yatinoda kumisikidza semufananidzo wepamberi, tinobva tadzvanya pairi sarudza patinoda kuiisa, pazasi peiyo springboard kana pane yakavharwa skrini.
Pasi pekona tichawana zvinotevera:
Yakavharwa skrini, kugadzirisa iyo mufananidzo pane yakavharika skrini yeiyo iPad yedu.
Chidzitiro chomumba, iyo ichatibvumidza isu kuti tiise iyo mufananidzo pane yekumba chidzitiro / chitubu chechiridzwa chedu kifaa.
ZveseNekudzvanya pane iyi sarudzo iyo mufananidzo uchaiswa pane ese maviri skrini.
Pakupedzisira tinowana sarudzo Kudzika, iyo inogoneswa nekukasira, iyi sarudzo inofambisa iyo yekumashure mufananidzo isu tichifambisa chishandiso.
Tinogona zvakare seta iyo yekumashure mufananidzo zvakananga kubva kuiri reel yemudziyo wedu. Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa kuenda kumufananidzo uri kubvunzwa, tinya pane bhatani rekugovana uye sarudza Wallpaper, kuitira kuti menyu yapfuura iratidzwe, kwatinosarudza kwatinoda kuratidza mufananidzo, pane iyo skrini yekukiya kana pa chinyorwa chekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Ungachinja sei iyo iPad Wallpaper
Chii chingaitwe neApple Watch yangu pasina iPhone yakabatana neinternet network?
Matipi ekuvandudza kushandiswa kwebhatiri kweApple Watch